Apple dia mampihena ny vidin'ny iMac 300-inch amin'ny vera nano miloko efa ho 27 euro Avy amin'ny mac aho
Rehefa nandeha ny andro ary ny haino aman-jery dia mijery ny fiovana tsy nambaran'i Apple tamin'ity hetsika ity isika, mahita vaovao mahaliana izahay. Ny iray amin'izy ireo dia hita ao amin'ny iMac 27-santimetatra, maodely iray izay, amin'izao fotoana izao, dia mbola tsy misy afa-tsy amin'ny processeur Intel tsy toy ny iMac 24-inch vaovao.
Ity modely ity, toy ny Pro Display XDR dia mamela ny mpampiasa hanana ampio vera nanotextured, miaraka amin'ny frazy 625 euro fanampiny. Ity vera ity dia mampihena ny fitaratra sy ny famirapiratana amin'ny fanomezana matte farany. Taorinan'ny hetsika dia nahenan'ny 300 Euro ny vidin'ity safidy ity.
Raha mijery ity maodely ity isika, dia hitantsika ny vidin'ny safidy amin'izao fotoana izao ho an'ny 345 euro, izay mihevitra ny fihenan'ny 280 euro. Na izany aza, ny fihenan'ny an'ity vera manokana ity dia mitohy amin'ny vidiny mitovy amin'ny Pro Display, vola fanampiny 1.000 euro.
Ao amin'ny famaritana an'ity safidy ity dia milaza i Apple:
Na dia ny vera mahazatra sy ny fitaratra misy nano vita amin'ny iMac aza dia manome taratra ambany dia ambany, zava-dehibe ny fanombanana ny tontolo iasanao.
Raha tsy afaka manitsy ny jiro manodidina ianao dia manana safidy matte vaovao miaraka amin'ny vera nano-texture. Raha ny mahazatra, ny velaran'ny efijery matte dia misy sarona manaparitaka hazavana.
Na izany aza, mampihena ny fifanoherana ireo sosona ireo, ankoatry ny famoahana setroka sy fahamaizana. Ny nanotearance an'ny iMac dia voasokitra ao anaty vera amin'ny haavon'ny nanometera, manolotra kalitaon'ny sary tena tsara izay mitazona ny fifanoherana ary manaparitaka hazavana hampihena ny taratra.
Amin'izao fotoana izao dia mbola miandry ny tsaho momba ny iMac avo lenta vaovao hotanterahina isika. Apple dia manohy manome soso-kevitra ny iMac 27-inch, natomboka tamin'ny volana aogositra lasa teo, ho solon'ny mpanjifa matihanina ankehitriny Tsy safidy intsony ny iMac Pro ho an'ny mpanjifa izay tsy mila Mac Pro.
Amin'izao fotoana izao, tsy misy tsaho manondro ny fanavaozana ny laharana iMac 27-inch, fanavaozana izay tokony hanafoana ireo processeur Intel hampidirina ireo mpikirakira Apple Silicon vaovao, mpikirakira izay, araka ny hitantsika tamin'ny hetsika farany, dia nanao izany ihany koa ho any amin'ny faritra iPad Pro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia mampihena ny vidin'ny iMac 300-inch amin'ny vera nano miloko efa ho 27 euro
Ny tranofiara voalohany amin'ny vanim-potoana faharoa an'i Ted Lasso dia misy ao amin'ny YouTube izao
Ny Apple Store dia miomana amin'ny famandrihana manomboka amin'ny 14:00 tolakandro.